Izinhlobo ezivamile zokushintsha ezisetshenziselwa ukukhiqiza ngogesi
Uma unentshisekelo yokuthola okwengeziwe ngama-microswitches, usekhasini elifanele. Kulesi sihloko, sizobheka izinhlobo ezahlukahlukene zokushintshwa okuncane. Lokhu kuzokusiza ukhethe iyunithi elifanele ukuhlangabezana nezidingo zakho zephrojekthi. Le ndatshana izokunikeza ukuqonda okujule kakhulu ku-6 t ...
Izinzuzo Eziphezulu Zokushintshwa Okuncane Okufanele Ukwazi Ekukhiqizeni
Ukwethulwa kokushintshwa okuncane emhlabeni kwamadivayisi we-elekthronikhi nemishini kwakuyinguquko. Uma ungumkhiqizi wemishini kagesi, ungahlala ngaphambi komncintiswano usebenzisa amaswishi amancane. Isizathu ukuthi amadivayisi ahlinzeka ngezinzuzo eziningi. Kule ndatshana, si ...
Okubalulekile Kokushintshwa Okuncane Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokukhiqizwa
Kungenzeka uke wabona ukushintshwa okuncane ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamadivayisi, kepha ungahle ungalazi igama eligcwele lalo mkhiqizo. Igama elithi switch micro libhekisele kushintshi yesenzo esincane esenziwe kancane. Igama linikezwa ngoba lolu hlobo lweswishi ludinga inani elincane lamandla ukuze kusebenze. Kulesi sihloko, siyi-g ...
I-Push Button Footswitch, Ukushintsha Amandla Shintsha, Inkinobho Push Micro Shintshela, Guqula i-switch switch, Micro Push Inkinobho Micro Shintsha No Nc Ndawonye, Guqula Shintsha,